Kalakar starting with letter P | Hamro Kalakar
Kalakar starting with letter P 
पार्वती कार्की हरेक प्रकारका गीत गाउन सक्ने खुवी भएकि गायिका हुन । रामेछाप जिल्लामा वि.सं. २०४४ साल फागुन १५ गते आमा उषा कार्की र वुवा भक्त बहादुर कार्कीको माइली सन्तानको रुपमा जन्म भयो । उनको दिदी एकजना, बहिनी एकजना र भाइ दुइजना छन । उनको वुवा पशुपत...
सानैदेखि स्कुलेजीवनबाट अनौपचारिक रुपमा सांगितिक क्षेत्रमा लागेका उनी घरपरिवारको साथ सहयोगमा अघि बढेकी हुन । उसो त उनको बुवाले पनी असाध्यै मिठो गीत गाउने गर्दथे । खाना खाइसकेपछि राती सुत्ने बेलामा उनको वुवाले गीत गाउँदा गीत सुन्नक...
Prakash Katuwal (Singer, Performer) is one of the popular Lok singer of Nepali music world. Blessed withagolden voice, he has touched the hearts of millions with his songs. He has proven his versatility in the field of music with his various singin...
नेपाली अग्रज लोक गायकको सूचीमा सँधै अगाडि आउने नाम हो, प्रेमराजा महत । नेपालरमा रहँदा गाउँ गाउँ पुगेर लोक भाका र शब्द शंकलन गरेर गीत गाउने उनी अहिले भने नेपालमा छैनन् । उनले नेपालमा रहँदा रेडियो नेपालमा लामो समय काम गरे । लोक गायनको श्रीबृद्धि...
पशुपति शर्माका बाबु आमाको सपना थियो, जेठो छोरालाई डाक्टर र कान्छो छोरालाई इन्जिनियर बनाउने । तर कान्छो छोरो पशुपतिले भने उनीहरूले भनेको मानेनन् । जेठो छोरो डाक्टर बन्न विज्ञान विषय लिएर पढिरहेका थिए । पशुपतीलाई इन्जिनियर पढ्ने दबाब परिवारबाट निरन्तर...
नेपाल आइडल सिजन वानको सेकेन्ड रनरअप हुन् प्रताप दास । सबै खाले गीत सुन्न र गाउने प्रताप नेपाली तारा सिजन थ्रिको थर्ड रनरअप पनि हुन् । ललितपुर झरुवारासीका प्रताप पारिवारिक वातावरण नै सांगीतिक भएकाले यस क्षेत्रप्रति आकर्षित भएको बताउँछन् । तीन...
लोकप्रिय गायक हुन् प्रमोद खरेल । प्रमोदसँग अहिले नाम छ, दाम छ, इज्जत छ, स्टेजमा दर्शकको हाईहाई छ । र, छ फेसबुक र ट्वीटरमा ठूलो फ्यान फलोइङ । तर, प्रमोद कहिल्यै हाईफाई लाइफ बाँचेनन् । न आज छ, न स्कुले जीवनमा थियो । उनी कलेज पढ्दा रंगरौस गर्न...